Mogadishu Journal » Dab qabsaday Hoteel ku yaalla bartamaha London
Dab qabsaday Hoteel ku yaalla bartamaha London
Mjournal :-Dab xooggan ayaa qabsaday mid kamid ah hoteellada raaxada ee kuyaal bartamaha magaalada London, todobbaad uun kadib markii dib loo cusboonaysiiyey uuna dhammaystay taariikhdiisa oo gaaraysa 115 sano.
Holac iyo qiiq kasoo baxaya ayaa la arkayey hoteelka wayn ee lagu magacaabo Mandarin Oriental oo kuyaal xaafadda bariga London kutaal ee Knightsbridge.
Ku dhawaad 120 dadka dabka damiya ah iyo 20 matoor ayaa lageeyey halka dhacdadu ay ka dhacday ee kutaal William Street, ee magaalada London.
Sida uu sheegay afhayeen hadlay ilaa iyo hadda lama oga sababta dhalisay dabkaas.
Gawaarida gargaarka dagdagga ah iyo Booliiska ayaa ka qayb qaadanaya xaaladda lagu daminayo dabka, sidoo kale lama soo sheegin wax dhaawac ah, sida ay sheegtay waaxda dab damiska.
Kadib markii uu dabku qabsaday dhismaha, shaqalihii ayaa loo daad gureeyey dhismaha Hyde Park, halkaas oo loogu qaybiyey caagado biyo ah.
Roberto Firmino oo weerar kulul ku qaaday Sergio Ramos